Arụmụka: Olee otu ụmụ nwoke si bụrụ mba ofesi na-ahụ maka ụmụ nwanyị? Girlsmụ nwanyị taa na-akpọrọ ụmụ nwoke maka ndị otu mba dị iche iche; ọ na-abụkarị ...
Site na: KongoLisolona: March 14, 2020 00: 20 Enweghị asịsa
BB, agụụ na-agụ m. N’ebe ahu i ghuru mmemme ihe oriri nke uwa (WFP);
BB, Achọrọ m 200 puku iji mepee ntutu m. N’ebe ahu i gha aburu International Monetary Fund (IMF);
BB, Enwere m ọrịa ị nwere ike ịbịa? N'ebe ahụ ị bụrụ Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO);
BB, Nwa nwanne nna m ga-aga ụlọ akwụkwọ (UNESCO), ọ gaghị ewetali ya. N'okwu a, ị bụ (UNICEF);
BB, Nwannem aghaghi imuta ihe, yabu, become buru ndi oru mmepe nke United Nations (UNDP);
BB, Achọrọ m iphone ma ọ bụ android. N'ebe ahụ ha ga-akpọrọ gị maka fortù Mba Nile nke la technology (ITU);
BB, can nwere ike ịchọta ọrụ maka nwanne m nwoke nke obere, lee, ị bụ International Labour Organisation (ILO).
Oh - ụmụ agbọghọ! Sistersmụnne m nwoke gbanwere: ịgbanwe mgbe mgbe bụ ịkatọ onwe gị. "Girlsmụ agbọghọ na-ahọrọ ka ha maa mma, karịa inwe ọgụgụ isi, n'ihi na n'etiti ụmụ nwoke, enwere nzuzu karịa ndị ìsì."
Ọkt20 12: 04